JUNE&MAY: တပေါင်းလပြည့်နှင့် တောင်ရေးမြောက်ရေး
ဒီနေ့မနက် အိပ်ယာကထတော့ အတူနေအိမ်ကအစ်မက
ဟုတ်သားပဲ။သူက ဘုရားကို သစ်သီး၅မျိုးကပ်မည်ဆို
ရာ သူ့ကောင်းမှု့ဖြင့် ကိုယ်လည်းသစ်သီး၂မျိုးပါဝင်ကပ်
လှူပြီး သားလေးနဲ့ ဘုရားရှိခိုးလိုက်တယ်။
ဒီနေ့မတိုင်မီ တစ်ပတ်အလိုလောက် ထဲက မမပုသိမ်သူ သီချင်းကိုဖွင့်ကာ ပုသိမ်မော်တင်စွန်းဘုရားပွဲ နဲ့
ကျုံမငေးမြတ်စွယ်တော် ဘုရားပွဲကို ဘယ်သဘောင်္က၊ဘယ်နှစ်ရက်ခရီးကို ဘယ်လောက်ဖြင့်သွားမည်ဟု
အပြိုင်အဆိူင် ကြေငြာသော မိုက်သံများဖြင့် တစ်မြို့လုံး ဆူညံနေသော ဇာတိမြို့လေးကို သတိရသွားတယ်။
နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မို့ လူငယ်၊လူကြီးတော်တော်များများသွားဖို့ အဖော်စပ် ၊လက်မှတ်ဝယ်နှင့် ပျော်ရွှင်
ကျုံမငေးမြတ်စွယ်တော် ဘုရားပွဲကို တော့တစ်ခါရောက်ဖူးတယ်။လူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးပြီး စည်းကားလှပေမယ့်
ဘုရားကိုအေးအေးဆေးဆေး ဖူးလို့မရ၊ဘုရားနားေ၇ာက်အောင် မတိုးနိုင်သဖြင်းတပ်ခေါက်ပြီးပြန်ခဲ့ရဘူးတယ်။
မော်တင်စွန်းဘုရား ပွဲကတော့ တစ်ခါမှမရောက်ဖူးပေ။မော်တင်စွန်းသို့ရောက်အောင် ပင်လယ်ကိုဖြတ်ရတယ်၊
လှိုင်းလုံးတွေက အိမ်တစ်လုံးစာလောက်မြင့်တယ်ဟူသော စကားများအရ အိမ်ကစိတ်မချ။သူများတွေ သွားတာ
ကိုသာ အိမ်ကနေ ငေးမောအားကျမိခဲ့တယ်။အရင်တုန်းက မိဘအုပ်ထိမ်းမှု့အောက်မှာနေတော့ မိဘက ဟိတ်
မသွားရဘူးဆိုရင် ဘာမှပြန်မပြောရဲဘူး။အခု ကိုယ့်အိမ်ထောင်နဲ့ကိုယ် လဲဖြစ်၊အုပ်ထိမ်းသူကလဲပြောင်းသွား
တော့ ဘယ်သွားချင်ချင် သူ့ကိုပဲ ပူဆာရတယ်။မြန်မာပြည်ပြန် ဖို့ ပလန် ရှိပြီဆိုရင် မပြန်ခင် လေး၊ငါးလအလို
တို့က ဒီတစ်ခေါက် ဘယ်သွားလည်ချင်တယ်ဆိုရင် အေး လိုက်ပို့မယ်ပြောတယ်။ဒါပေမယ့် ပြန်ဖို့ အချိန်နီးလာ
ရင် လိုက်ပို့မယ်ဆိုတဲ့ အသံ မကြားရတော့ဘူး။မြန်မာပြည်ရောက်သွားလို့ မသွားရလို့ ပွစိပွစိ လုပ်ရင် သူက
ပြောသေးတယ် ပြန်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ် မိဘတွေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးနေချင်လို့ ပြန်လာတာတဲ့
Posted by JuneOne at 7:00 PM
Anonymous March 10, 2009 at 9:58 PM
မြန်မာနေ့တွေကို မေ့နေတာ။အခုမှ ဒီနေ့တပေါင်းလပြည့်ဆိုတာသိတာ။
ဇနိ March 11, 2009 at 2:04 AM
Annpi March 11, 2009 at 10:04 AM
ThuHninSee March 11, 2009 at 1:33 PM
နောက်တစ်ခါဆို ချိန်းပြီး ပြန်ကြတာပေါ့။ သူတို့မလိုက်လဲနေ..
သားလေးနဲ့ တို့နှစ်ယောက်အတူ လျှောက်လည်မယ်လေ။
nu-san March 11, 2009 at 9:28 PM
အတူတူပဲ ကျော့ရေ.. မပြန်ခင်တုန်းကတော့ ဘယ်ပဲသွားချင်ချင် လိုက်ပို့ပေးမယ် ဆိုတာချည်းပဲ..တကယ်တမ်းလည်းကျရော.. ဘာအသံမှ ကြားရတော့ဘူး.. :D
မီယာ March 12, 2009 at 5:43 AM
လိုက်မပို့လည်း ကိုယ့်ဘာသာ သွားလို့ရတယ်လို့ ပြောကြည့်ပါလား...
တို့တော့ အိမ်တောင်ခွဲအိပ်လိုက်သေးတယ်... လူတွေက ရန်ဖြစ်လာတယ်ထင်လို့..
juneone March 12, 2009 at 12:19 PM
khin oo may March 15, 2009 at 1:09 PM
ဂျွန်ဝမ်း ချဉ်ပေါင် နဲ့ မယှဥင်္နိုင်ပါဘူးကွယ်။
လမ်းဖြတ်ကူးသူအား မန်းရာဇာခရီးသည်တင်ယာဉ်မှ ဝင်တိုက်မိရာ နေရာတွင်သေဆုံး - ကျောက်တံခါး ဧပြီ ၂၁ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကျောက်တံခါးမြို့မရဲစခန်းအပိုင် ရန်ကုန် - မန္တလေးကားလမ်းဟောင်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၁၇/၁နှင့်၂အကြား အလယ်ကျွန်းကျေးရွာ၌ ဧ...
Women in Innovation and Creativity Award ဆု ခရစ်စတီးနားခီ ကို ပေးအပ် - စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ကိုပေးအပ်တဲ့ ( Women in Innovation and Creativity Award ) ဆု အတွက် ဒါရိုက်တာ ခရစ်စတီးနားခီ ကို မြန်မာ့ အသိဥာဏ်ပ...
ကာတွန်း Joker - အချင်းချင်းတွေမို့ - *ကာတွန်း Joker - အချင်းချင်းတွေမို့* *(မိုးမခ) ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၈*
Trump Wins Again: Fat Boy Kim Stops Nuke Program - (Jeremy White’s article from The INDEPENDENT UK on 20 April 2018.) North Korea announces it will stop all nuclear tests and missile launches as Trump hail...
ပိန်ချင်တာကြောင့် အဆီကျဆေးတွေသောက်ဖို့ စဉ်းစားနေပြီလား - *ရေးသားသူ* Aye Thi Mon *ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ* Dr. Kaung Thar. *ပိန်ချင်တာကြောင့် အဆီကျဆေးတွေသောက်ဖို့ စဉ်းစားနေပြီလား* အထိုင်များလာတဲ့ ဘဝနေထိုင်...